Aza asiana mailaka amin'ny mpandoro aoriana! | Martech Zone
Zoma 18 Novambra 2011 Tempolin'i Lavon
Amin'ny farany Lahatsoratra ho an'ny vahiny Delivra ho an'i Martech, Neil dia nanisy fanadihadiana izay manontany anao rehetra ny sasany amin'ireo sakana lehibe indrindra atrehanao amin'ireo programa mailakao. Ny iray tamin'izy ireo dia ny tsy fahampian'ny fotoana hanatanteraka izay tadiavina. Azoko tsara ny fanerena ahy ho amin'ny fotoana; toa tsy nisy ora firy isan'andro!
Na izany aza anefa, dia mamporisika anao aho hanao ny programa mailaka a laharam-pahamehana. Raha mbola tsy nanomboka programa mailaka ianao dia efa manomboka ny fotoana hanombohana. Raha nanomboka programa ianao, nefa nanao tsinontsinona azy io, mamporisika anao aho hanokana fotoana handinihana sy hamaritana izay faritra mila jerena haingana. Aza apetraka amin'ny programa ny mailakao mpandoro lamosina!
Diniho indray ny paikadim-barotra amin'ny mailakao
Manadio lisitra ary esory ny adiresy ratsy
Mamorona vaovao ary nohatsaraina ny atiny
Update kopia izay mifantoka amin'ny fampidirana ny mpihaino anao ary mandrisika azy ireo hanao zavatra
Ny fandaniana fotoana hifantohana amin'ny programa marketing mailakao dia mety ho ny tsy fitoviana amin'ny fanatontosana mpihaino marobe, ny fampidirana indray ny mpihaino anao ankehitriny, ary ny famoronana ROI lehibe kokoa. Miaraka amin'ny Taom-baovao ho avy, izao no fotoana mety indrindra hanesorana ny programa mailaka mailakao amin'ny burner ao aorianao ary ataovy lohalaharana izany!
Tags: delivravarotra mailaka delivrapaikadin'ny taona vaovaopaikadin'ny mailaka
nMifandraisa pejy mitombo isaky ny fitsidihana 9.6%.
18 Novambra 2011 à 1:06
Lahatsoratra mahafinaritra, @lavon_temple:disqus ! Azoko lazaina manokana, io mailaka io dia nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny fitomboantsika tao amin'ny bilaogy Teknolojia Marketing. Raha nahafantatra ny fiantraikany aho dia ho nanao izany ho laharam-pahamehana lehibe kokoa taona maro lasa izay.